Giraantu Naqshadeeye ayaa ka helaya qaab dhismeedka geedka qaanso iyo qaansoroobaad. Laba motifs - nooc qaanso ah iyo qaab dhicis ah, ayaa la isu geeyay si loo abuuro hal qaab oo leh 3 qaab Adoo isku daraya khadadka ugu yar iyo foomamka iyo adeegsiga mowduucyo fudud iyo kuwo caadi ah, natiijada waa giraan sahlan oo xarrago leh oo laga dhigayo geesinimo iyo ciyaar leh iyadoo la siinayo meel tamar iyo laxanka lagu socdo. Xaglo kala duwan qaabkii giraanba isbeddelaya - qaabka dhibicda waxaa laga arkaa xagal hore, qaab gees ah waxaa laga arkaa xagal dhinaca, iskutallaabna waxaa laga arkaa xagasha kore. Tani waxay siisaa dhiirrigelin bixiyuhu.
Khamiis 9 Bisha Sagaalaad 2021
Giraantu Adigoo si fudud ficil u muujinaya, ficil taabasho ayaa xambaarsan shucuur qumman. Iyada oo la adeegsanayo giraanta "taabashada" taabashada ee taabashada ah, naqshadeeyaha ayaa ujeeddadiisu tahay inuu ku soo gudbiyo dareenkan diiran oo qaab la’aanta leh birta qabow iyo adag. 2 cirroole ayaa la isku darayaa si loo sameeyo giraan soo jeedinaya 2 qof oo gacmaha is haysta. Giraantu waxay bedeshaa wajigeeda markii booskeeda lagu rogay farta lagana arki karo xaglo kala duwan. Marka qaybaha iskuxiran la dhex dhigo faraha dhexdooda, giraanku wuxuu u muuqdaa mid huruud ama cadaan ah. Marka qaybaha kuxiran farta lagu dhejiyo, waad ku raaxeysan kartaa labadaba midab huruud iyo cadaan wadajira.
Giraan Qaab-Dhismeedku Naqshadeynta ayaa ka kooban qaab dhismeedka bir bir ah kaasoo druzy loo qabtay si ay jirto culeys labada dhagax iyo waliba qaab dhismeedka biraha. Qaab dhismeedku waa mid furan oo hubinaya in dhagaxu yahay xiddigta naqshada. Qaabka aan caadiga ahayn ee dheecaanka iyo kubbadaha birta ah ee qaab dhismeedka leh waxay u keenayaan jilicsanaan yar naqshada. Waa mid geesi ah, quruxsan oo xidhan.
Talaado 7 Bisha Sagaalaad 2021
Isniin 6 Bisha Sagaalaad 2021
Axad 5 Bisha Sagaalaad 2021
Wuhan Pixel Box Cinema Shineemo Arbaco 22 Bisha Sagaalaad
Opx2 Rakibaadda Optic Talaado 21 Bisha Sagaalaad
Vivit Collection Hilqado Iyo Giraan Isniin 20 Bisha Sagaalaad
Giraantu Giraantu Giraan Qaab-Dhismeedku Naqshada Dharka Hilqado Boorsooyinka Gacanta